Amin’ny maha tarana-janahary sy mpino an’Andriamanitra anay, hoy ny filohan’ity fikambanana ity, Ny Rado Rafalimanana, dia anjara biriky ho entinay voalohany ny fiantsoana ny malagasy rehetra tsy an-kanavaka na inona finoany ho tonga eny. Ara-bakiteny ity fotoam-pivavahana ity, raha ny fanazavany, satria na Boudiste na Miozilimanina na Kristianina na inona na inona finoany dia asain’izy ireo avokoa. Mafy nohon’ny fahavoazana ekonomika eran-tany, nohon’ny tamin’ny taona 2008 no hitranga amin’ity, hoy izy, rehefa jerena ny zava-misy. Andao hitodika amin’Andriamanitra aloha vao mijery zavatra hafa. Rehefa mikatona toy izao ny firenentsika dia tsara raha mitodika amin’ny fanomezan-danja ny vokatra eto Madagasikara isika. Mikasika ny fandaminana kosa dia nilaza izy ireo fa ny iriany dia mandray anjara daholo ny finoana rehetra izay tonga ary inoana fa hilamina io satria fitambarana. Tsy mbola eto ny Coronavirus ka tsy hatahorana ny fifamoriana, hoy hatrany ny fanazavany.